Ndị na -ebubata inkjet Memjet na ụlọ ọrụ - China Memjet Inkjet Manufacturers
Akwụkwọ mmado maka inkjet & Memjet PET
Nkọwa ngwa ngwa ngwakọta: 80um Inkjet & Memjet transperent PET + gluu mmiri / gbazere ọkụ + 60g glassine ọcha. Ngwaahịa na -akọwa: mkpuchi inkjet. Mbipụta: Inkjet / Memjet na -ebi akwụkwọ Ngwa: Aha nri, akara ihe onyonyo, akara ọgwụ, ihe mmado omenala, akara ịchọ mma wdg.
Nkọwa ngwa ngwa ngwakọta: 80um Inkjet & Memjet matte silver PET + gluu mmiri / gbazere ọkụ + 60g glassine ọcha. Ngwaahịa na -akọwa: mkpuchi inkjet. Mbipụta: Inkjet / Memjet na -ebi akwụkwọ Ngwa: Aha nri, aha ihe onyonyo, akara ọgwụ, ihe mmado omenala, akara ịchọ mma na aha ụlọ ọrụ wdg.
Akwụkwọ mmado maka inkjet & Memjet PP
Nkọwa ngwa ngwa Ihe: Akwụkwọ, Inkjet Paper, Inkjet PP, Inkjet Film, HP indigo ojiji: akwụkwọ mmado ahaziri Ụdị: Nrapado Njirimara: Nhazi omenala mmiri anaghị anabata: Nabata ebe mbido: Zhejiang, aha akara China: Shawei Digital Model Number: SW0010 Label ụdị: Label na -aga n'ihu, akwụkwọ na -agagharị agagharị, akara mkpị ọnwụ, akara akara ojii nha: mpịakọta na -aga n'ihu, akwụkwọ mmachi ebipụ nrapado: akwa dị elu na -agwụcha :: matte, kenkowaputa, doro anya (ihe nkiri)